9-ka Macaamiil ee ugu Fiican Bittorrent-ka Linux | Laga soo bilaabo Linux
Macaamiisha 9 Bittorrent Macaamiil ee Linux
BitTorrent waa a nidaamka loogu talagalay isdhaafsiga aruurinta asaag ilaa fac (isbarbardhig si aad u aragto o P2P). Borotokoolka Bit Torrent waxaa asal ahaan soo saaray barnaamijka Bram cohen waxayna ku saleysan tahay softiweer bilaash ah.
Waa kuwan liiska macaamiisha ugu fiican Bittorrent ee GNU / Linux.
Gudbinta Macaamiil P2P miisaan fudud, bilaash ah iyo il furan ee shabakadda BitTorrent. Waxaa laga heli karaa hoosta Shatiga MIT, oo leh qaybo ka mid ah GPL, Waana marinka iskutallaabta. Waxay taageertaa kuwan soo socda nidaamyada hawlgalka: Mac OS X (Is-dhexgal kookaha, hooyo), Linux (Is-dhexgal GTK +), Linux (Is-dhexgal Qt), NetBSD, FreeBSD y OpenBSD (Is-dhexgal GTK +) iyo BeOS (interface interface). Nooca ugu horreeyay, 0.1, wuxuu soo muuqday 2005.
Gudbinta waxaa loogu talagalay inay noqoto mid deg deg ah oo fudud. Waxay isticmaashaa qadar aad u yar oo kheyraad ah inta ka hartay macaamiisha Bittorrent (sida Vuze). Barnaamijkan aadka u wanaagsan wuxuu doonayaa inuu bixiyo waxqabadyo waxtar leh oo si fudud loo barto, iyadoo laga fogaanayo in adeegsadaha la dul dhigo xirmooyin howleed oo aakhirka jahwareer halkii laga caawin lahaa. Sababtaas awgeed ayay ka hawl yar tahay inta kale ee macaamiisha "dhammaystiran".
Gudbinta waa macmiilka rasmiga ah ee qaybinta caanka ah Ubuntu.
Kala soocida xulashada iyo kala hormarinta feylasha
Taageerada idaacadaha la duubay
Taageero badan trackers
Taageerayaasha raad raac HTTPS
Azureus iyo sharingTorrent iswaafajinta font
Khariidaynta dekedda otomaatiga ah (adoo adeegsanaya UPnP/NAT-PMP)
Puerto dhageysi kali ah dhamaan .torrent.
Resume dhakhso leh - oo ay kujirto keydka asaaga
Fursadaha otomaatiga ah (wadaag xogta la soo dejiyey)
Mamnuucida otomaatiga ah macaamiisha soo gudbiya xog been ah
Ogeysiisyada Dock y Koraaya
Qalab khaas ah oo la adeegsan karo
Cusboonaysiinta otomaatiga ah adoo adeegsanaya aqrisanin
Ku rakib: horay ayaa loogu rakibay Ubuntu. Waxaa laga heli karaa bakhaarrada Ubuntu.
Bogga rasmiga ah: http://www.transmissionbt.com/
Duufaan Macaamiil BitTorrent , oo la abuuray iyadoo la adeegsanayo Python y GTK + (iyada oo loo marayo PyGTK). Daadka waxaa loo isticmaali karaa nidaam kasta oo qalliinka xushmeeya heerka POSIX. Waxaa loogu talagalay in la siiyo macmiil u dhashay oo dhameystiran jawiga desktop-ka ee GTK sida GNOME y Xfce. Nooc rasmi ah oo loogu talagalay Windows ayaa hadda socda. Barnaamijku wuxuu adeegsadaa maktabada C ++ libtorrent.
Dhawaan, horumarku wuxuu diiradda saaray keenista daadadka nidaamyada kale ee hawlgalka. Laga bilaabo nooca 0.5.4.1, Daadka ayaa loo heli karaa Mac OS X Iyada oo loo marayo Macdanta iyo rakibe rasmi ah oo loogu talagalay Windows ayaa la heli karaa.
Daadka waxaa loogu talagalay inay ahaato mid fudud oo caqli badan. Waxay u oggolaaneysaa soo degsasho badan isla waqti isku mid ah, dhammaantoodna waxay ku soo bandhigaysaa daaqad isku mid ah. Markaad u baahato inaad wax kale qabato, si fudud ayaad u yareysaa saxaaradda oo durdurradaadu si qurux badan ayey u soo dejistaan ​​iyaga oo aan faragalin shaqadaada.
Fikradayda, macmiilka ugu fiican ee Bittorrent ee Linux, oo ay weheliso Gudbinta (in kasta oo kan dambe yahay macmiil "dhuuban" oo ka yar "dhammaystiran").
Torrenting waxaa lagu soo daray macmiilka weyn
Plugins loo hirgeliyey sidii modules
Deluge waxay taageertaa xulashooyinka isku xirka ee soo socda:
Taageerada ugu weyn ee DHT
Isdhaafsiga lammaanaha by UTORrent
Qarsoodi BitTorrent siyaabo badan heerar kala duwan
Taageerada wakiil ee asxaabta, trackers DHT, iyo abuurida websaydhka
Daadad gaar loo leeyahay
Intaa waxaa sii dheer, daadku wuxuu leeyahay astaamaha soo socda ee la heli karo:
Kuu ogolaanayaa inaad kala soo degto faylal badan daaqad keliya
Qoondeyn buuxda iyo qoondeyn kooban
Xaddidaadda xawaaraha adduunka ama soo dejin kasta
Awood u leh inuu ka soo xusho feylasha durdurka ka hor inta uusan bilaabin soo dejinta
Ikhtiyaar si loo kala hormariyo qaybaha hore iyo kan dambe ee feyl, si loogu oggolaado aragtida warbaahinta
Awood u leh sheegida faylka soo dejinta adduunka, iyo galka faylasha la dhammaystiray
Nidaamka safka loogu jiro maareynta xawaaraha ugu fiican ee u dhexeeya soo dejinta
Awood u lahaanshaha joojinta wadaagista feylka marka la gaaro saamiga la cayimay
Awood u leh in lagu yareeyo saxaaradda nidaamka, iyo ikhtiyaar ahaan in loo ilaaliyo qashinka sirta ah
Dhoofinta liiska Block
Saamiga la doonayo
Shaxda waxqabadka shabakadda
Kormeeraha caafimaadka shabakadda
RSS Soo Dejiye
Ku rakib: Waxaa laga heli karaa bakhaarrada Ubuntu.
Bogga rasmiga ah: http://deluge-torrent.org/
KTorrent waa macmiil u ah BitTorrent waayo, KDE ku qoran C ++ y Qt. Qayb ka noqo KDE Soosaaray, iyo kuwiisa interface user waa fududahay. Waa macmiilka ugu fiican uguna caansan ee loo yaqaan 'BitTorrent' KDE.
U dhiganta Ktorrent for GNOME waxay noqon lahayd daad
Faylasha soo dejiso torrent qaab kooxaysan.
Taageerid SHARAABAAD illaa nooca 5aad, oo u oggolaanaya inay xitaa ka dambeyso a galka dabka.
Joojinta soo dejinta durdurrada haddii booska ku yaal HDD way yartahay.
Xaddididda xawaaraha soo dejinta iyo soo dejinta xogta, xitaa shaqsi u gaar ahaanta durdur kasta.
Raadinta internetka ee faylasha durdurka iyadoo la adeegsanayo makiinado kala duwan, oo ay ku jiraan kuwa bogga rasmiga ah ee BitTorrent (isticmaalaya Guureeye Iyada oo loo marayo KParts), iyo sidoo kale suurtagalnimada inaad ku darto mashiinnadaada raadinta.
Raadinta UDP, macluumaad dheeraad ah.
Jadwalaha isku habeysan ee loo adeegsan karo hal saac gudahood maalin kasta oo ka mid ah usbuuca.
Taageerada UPnP y DHT.
Awood u leh inuu soo dejiyo faylasha gabi ahaanba ama qayb ahaan.
Sifee Cinwaanada IP rabin.
Sirta hab maamuuska.
Kuu ogolaanayaa isdabamarinta daadka
Soo degsasho otomaatig ah oo ka socota quudintooda RSS.
Bogga rasmiga ah: http://ktorrent.pwsp.net/
BitTornado Macaamiil BitTorrent. Waa dhaxalka Macaamilka Tijaabada ah ee Shad0w. Waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay macmiilka ugu horumarsan borotokoolkan.
Isku xirku wuxuu xusuusinayaa asalka BitTorrent, laakiin wuxuu ku darayaa shaqooyin cusub.
Soo dejiso / soo rog xaddid
Mudnaanta mudnaanta soo dejinta markii faylal badan la soo dejiyo
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan la xiriirka macaamiisha kale
Gudbinta Port Portka (Universal Plug iyo Ciyaar)
Taageerada PE / MSE
Bogga rasmiga ah: http://www.bittornado.com/
qBittorrent waa macmiil si buuxda u soo muuqday Bittorrent oo si buuxda ugu qoran C ++ iyo Qt4, kuna saleysan maktabadda libtorrent-rasterbar.
Waa bedel aad u fiican mid ka mid ah macaamiisha kale ee horumarsan.
Waa mid aad u dhakhso badan oo ay ku jiraan taageerada Unicode iyo sidoo kale astaamo kale oo badan sida, tusaale ahaan, mashiin raadin durdur wanaagsan oo isku dhafan.
Soo Dejiso / Soo Qaado Daadad Badan oo Isku Mid Ah
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad raadiso buugga oo aad kala soo baxdo dhammaan durdurrada ku jira.
Taageerada DHT (BT baahin BT / Trackerless)
Taageerada orTorrent Peer eXchange (PeX)
Taageerada sirta Vuze
Soo gudbinta dekedda UPnP / NAT-PMP
Kusoo qor RSS Feeds
Falanqee faylasha / maqalka / fiidiyowga sida loo soo dejiyey
Xaddid xawaaraha soo dejinta iyo soo dejinta (adduunka oo dhan ama torrent x torrent)
U soo degso si taxaddar leh (uga gaabiya laakiin sifiican ugu fiirso faylka)
Xullo kaliya feylasha qaar tog gudihiisa si aad u soo dejiso
Suurtagalnimada abuurista togag
Mashiinka raadinta durdur isku dhafan
Waxaad toos uga soo rogan kartaa durdurka URL-keeda
Taageerada miirayaasha IP
Waxay muujinaysaa saamiga soo dejinta / soo dejinta durdurka
Xiriirka shabakadda ee kontaroolka fog
Taageero luqado badan (~ 25)
Bogga rasmiga ah: http://www.qbittorrent.org/
durdur waa macmiil u ah BitTorrent en qaabka qoraalka awood u leh inay la tartamaan macaamiisha kale ee GUI; gaar ahaan isticmaalkeeda hooseeya ee kheyraadka.
Waxaa loo heli karaa qaybinta qayb kasta oo ka mid ah barnaamijka 'Linux' iyo qayb ahaan hirgelinta Mac OS.
rtorrent wuxuu ku saleysan yahay maktabadda LibTorrent. Labadaba waxaa lagu qoray C ++ iyadoo xooga la saarayo waxtarka iyo xawaaraha, iyadoo weli la siinayo waxqabadyada aan ka heli karno macaamiisha leh qaab muuqaal ah.
Isticmaal URL ama waddo si aad ugu darto durdurrada
Jooji / tirtir / dib u bilow qulqulka
Ikhtiyaar ahaan, si otomaatig ah u soo rar / u keydso / u tirtir durdurrada cinwaan gaar ah
Waxay taageertaa soo koobid aamin ah oo dhakhso leh
Waxay muujineysaa macluumaad badan oo ku saabsan asxaabta iyo durdurrada
aria2 waa aalad aad u faa'iido badan oo faylasha looga soo dejisto qunsulka.
aria2 waxay kala soo bixi kartaa fayl ilo kala duwan iyo / ama maamuusyo kala duwan waxayna isku dayeysaa inay adeegsato xadka ugu badan ee la heli karo. Waxay taageertaa hab maamuuska HTTP, HTTPS, FTP iyo BitTorrent.
Soo dejiso feylasha adoo adeegsanaya hab maamuuska HTTP, HTTPS, FTP iyo BitTorrent
Soo Degsasho Qaybsan / Qaybsan
Taageerada Metalink v3.0
Taageerada xaqiijinta PROXY
Taageerada sugida Aasaasiga ah
Xaqiijinta asxaabta HTTPS iyadoo la adeegsanayo shahaadooyinka CA ee lagu kalsoon yahay
Shahaadada Hubinta Macmiilka ee HTTPS
Raridda Firefox3 iyo Mozilla / Firefox (1.x / 2.x) / Kukiyada Netscape
Taageerada cinwaanka gaarka ah ee HTTP
Taageerada isku xirnaanta joogtada ah
Soo rar oo soo deji xawaaraha
Magacaabi / beddel qaabdhismeedka geedka buugga soo degsashada
U orod sidii hannaanka daemon
Xulashada kala soocida feylka / faylka badan
Faylka isku xidhka
Taageerada URI-yada la cabbiray
Bogga rasmiga ah: http://aria2.sourceforge.net/
Vuze, kahor Azureus, waa barnaamij loogu talagalay P2P. Wuxuu macmiil u yahay BitTorrent waana ka il furan. Waxaa lagu horumariyay Luqadda barnaamijka Java, markaa waa qaab-dhismeed badan, isagoo rakibay kan Mashiinka dalwaddii Java. Waxay u shaqaysaa labadaba nidaamyada Mac, sida Windows o GNU / Linux.
Macmiilka BitTorrent wuxuu si buuxda ula jaan qaadayaa shabakada BitTorrent sidoo kale waxaa ku jira waxa la filayo inay mustaqbalka noqdaan mustaqbalka p2p, isagu Streaming fiidiyowyada oo qeexitaan sare ama tayo leh DVD iyada oo loo marayo adeegga macluumaadka shirkadda californian Vuze Inc. Iyadoo loo marayo shabakadaha asxaabta, waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay isweydaarsadaan fiidiyowyadooda, u kala saaraan, qiimeeyaan oo ay ku daraan faalooyinka
Vuze waxaa lagu soo saaray Java, Waa il furan waana shati GPL waxaana loo heli karaa nidaamyada hawlgalka Microsoft Windows, Mac OS y Linux iyo guud ahaan, nidaam kasta oo hawlgal oo socon kara Java iyo taageerooyin SWT. Astaanta azureus waxaa matalaya sawirka raha sunta ah Dendrobates azureus, kaas oo ku nool Koonfurta Ameerika, weelka Amazon.
Istaatistikada horumarsan - Waxay bixisaa macluumaad horumarsan oo ku saabsan horumarka daadka, waxqabadka, iyo wareejinta.
Abaabulaha Gawaarida: wuxuu u kala qaadaa durdurrada ku saleysan noocyada feylkooda (muusikada, filimada, iwm.)
Xawaaraha Gawaarida: toosinta tooska ah ee xawaaraha soo dejinta oo ku saleysan shabakadda "saturation".
Auto Seeder: abuur fayl otomaatig ah oo ku saleysan durdurrada durdurka iyo geedka buugga.
Wadahadal lagu dhisay, adoo adeegsanaya borotokoolka cr3.2
Soo dejiso durdurro badan isku mar
Xaddid soo dejinta iyo soo dejinta durdurrada, heer caalami iyo shaqsi ahaanba
Xeerarka horumarsan ee abuurka
Kaydinta disk la hagaajin karo
Waxay u isticmaashaa 1 deked oo dhan daadka.
Taageerada UPnP (gudbinta dekedda)
Waxay taageertaa adeegsiga wakiil, labadaba raadraacaha iyo wada xiriirka u dhexeeya asxaabta
Soo koobitaan deg deg ah oo aamin ah.
Kuu ogolaanayaa inaad si ay u dejiso tusaha dejinta iyo guurto downloads dhameystirtay
Kuu ogolaanayaa inaad si toos ah uga soo dajiso durdurrada galka gaarka ah
Interface aad u customizable
Qalabka IRC waxaa lagu soo daray caawimaad deg deg ah
Bogga rasmiga ah: http://azureus.sourceforge.net/
qulqulka qulqulka waa macmiil u ah BitTorrent diyaar u ah in lagu rakibo on server isticmaalaya nidaamyada Linux, Unix y BSD. Marka la rakibo oo uu ku shaqeeyo serverka, isticmaalehu wuxuu ku heli karaa maamulka barnaamijka iyada oo loo marayo interface dhexdhexaad ah oo fudud oo fudud.
Waxay taageertaa luqado kala duwan iyo isticmaaleyaal, si qof walba uu u helo liistadooda u gaarka ah ee soo degsashada iyo feylasha ku jira darawalka adag. Gudiga maamulka waxaad ku dari kartaa feylal cusub safka soo dejinta, nadiifi kuwa la soo dejiyey, wax ka bedel ku samee xuduudaha qaabeynta, baari cinwaanada isticmaalaha ... howlaha caadiga ah ee macmiil kasta oo noocaan ah. Xitaa waxay kuu ogolaaneysaa inaad si toos ah uga dhex raadiso durdurrada trackers ugu caansan oo ku dar safka adigoon ka bixin guddiga maamulka.
Iyada oo ay ugu wacan tahay dabeecadda ballaadhan ee loo yaqaan 'torrentflux-b4rt', waxaa jira noocyo badan oo qalab saddexaad ah iyo adeegyo dheeri ah oo laga awoodin karo guddiga kantaroolka.
Taageerada Bittorrent, HTTP, HTTPS, FTP, Usenet.
Xakamaynta wareejinta midaysan
Jooji / Bilow / Dib u billow / tirtir hawlgallada saameeya wareejinta shaqsiga, wareejinta oo dhan ama kuwa la xushay oo keliya.
Beddel dejinta "duulimaadka", iyada oo aan loo baahnayn in dib loo bilaabo barnaamijka: soo dejiso oo soo dejiso saamiga, imisa xiriiro oo la isticmaalo isla waqtigaas, iwm.
Kala wareejin kasta oo shaqsiyeed ah waxay yeelan kartaa dejin u gaar ah.
Muujinta macluumaadka wareejinta: xawaaraha soo dejinta iyo soo dejinta, saamiga, boqolkiiba la dhammaystiray, iwm.
Diiwaanka dhammaan daadadka, taas oo sahlaysa in la ogaado lana xalliyo dhibaatooyinka markay dhacaan.
Seeder iyo leecher x sawirada durdurrada.
fluxcli.php - waa nooc buuxa oo torrentflux-b4rt ah oo loogu talagalay terminal / console.
Hubi RSS-ka si joogto ah oo u soo dejiso
Jadwal u sameyso shaqooyinka 'cron' si aad "u daawato" fayllada oo aad u ogaato marka durdurro cusub lagu daro iyaga. Kadib bilaw inaad si toos ah u soo dejiso
Bogga rasmiga ah: http://sourceforge.net/projects/tf-b4rt.berlios/
Ugu dambeyntii, waxaan kugula talinayaa inaad aragto tan miisaan siman ee DHAMMAAN macaamiisha Bittorrent ee hadda jira oo ay sameeyeen saaxiibadood Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia & Xirmooyinka Linux
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Macaamiisha 9 Bittorrent Macaamiil ee Linux
Isticmaalka Ktorrent ^ __ ^
Jawaab si aad ugu raaxaysato
Lama yaqaan # 1 dijo
Jawaab Lama Oga # 1
Ma aanan aqoon isaga ... Waan raadsanayaa isaga! Waad ku mahadsantahay warbixinta ...
MLDonkey ??? 😀 taasi waa tan ugu fiican, wax walbana way u socotaa!
Haa, way fiican yihiin ...
Gustavo Huarcaya dijo
KTorrent iyo rTorrent waxa ugu fiican ee aan isticmaalay.
Jawaab Gustavo Huarcaya
niiko 6480 dijo
waxa i xiisaynaya ayaa ah in la ogaado midka ka dhakhsaha badan
Jawaab ku siiso nipika6480
Waad salaaman tahay, waxaan imid adduunka Linux waxaanan su'aal la qabaa macmiilka bittorrent «Gudbinta»: markaan dhagsiiyo «magnet linkiga» degelka si aan u soo dejiyo faylal taxane ah, Ma aqaan sida loo xusho Faylasha aan doonayo inaan soo dejiyo iyo kuwa aanan ku jirin "Guryaha" faylasha aan soo degsanayo uma muuqdaan ... Haddii ay tahay wax uun isticmaal ka hor intaanan u wareegin Linux waxaan isku dayay inaan ku soo dejiyo isla faylashaas "Utorrent" "iyo haddii aan dooran lahaa kuwa aan doonayo.
Waxaan u maleynayaa in gudbinta aysan laheyn ikhtiyaarkaas. Waxaa laga yaabaa inaad isku dayi karto daad ama qbittorrent.
Goor dambe ayaa ka wanaagsan, in ka badan sannad daahitaan 🙂 aan waligeed.
Waxyaabaha ku saabsan Gudbinta iyo birlabku waa in ilaa aad ka bilowdo soo degsashada magnet uusan faylka ka muuqan astaamaha magnet-kaas.
Ma aqaano haddii tani ay sidoo kale ku dhacdo macaamiisha kale, maxaa yeelay waxaan isticmaalayay Gudbinta muddo sannado ah.
Haddii qof uu sheegi karo haddii ay ku dhacdo macaamiisha kale, macluumaadka waa la qadarin doonaa.
Mid ka mid ah magnets-ka kuma dhacayo waalidka caadiga ah, sida ugu dhakhsaha badan ee aad u geliso inaad kala soo baxdo faylasha kala duwan (haddii ay jiraan wax ka badan hal) ayaa lagu arki karaa astaamaha.
Waxa aan badanaa ku sameeyo magnets waa inaan u oggolaado inay bilaabaan inay hoos u dhacaan ka dibna (markay faylasha horey u soo baxaan) waxaan siiyaa "Hakad", midig u guji magnetka >> Guryaha, Waxaan calaamadeeyaa waxa aan doonayo ama aanan soo dejineynin, mudnaanta iyo / ama ikhtiyaarrada kale oo waxaan ku dhuftay mar kale "Ciyaar".
Aniga ahaan Gudbinta ayaa ugufiican.
Iyo inta badan distros-ka (laga bilaabo Debian), taas oo wax loogu daro sida caadiga ah.
Ku jawaab Aliana
iyo Tixati ayaa ugu jecel windows iyo linux !!!
Distros iyo barnaamijyada isbitaalada ama rugaha caafimaadka
Ciyaaraha 12ka Ciyaaraha Furan ee Ugu Fiican